Soo dejisan Synthesia 10.2 – Vessoft
Soo dejisan Synthesia
Synthesia – software haboon in kuu ogolaanayaa inaad si ay u bartaan inay ciyaaraan biyaano ah. Synthesia awood u ah in la xusuusto oo luuq ee ka kooban music ah aqoonta qoraalada aan ka dibna la ciyaari biyaano ah. Software waxaa ka mid ah tiro badan oo ah gabayo iyo kuu oggolaanayaa in aad samayn muyuusigu wixii song. Synthesia awood u koox aad songs, maktabadaha by fayl ama midabada. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay soo bixi kuwan raadkaygay music la darajo ah oo dhib kala duwan oo internet-ka. Synthesia kale oo ku jira ciyaaryahan dhisay-in uu u ciyaaro MIDI-files.
Barashada inuu u ciyaaro biyaano ah
Calan of darey muusikada
Heeso Download internet ka
Inaan u ciyaaro ee MIDI-files
Synthesia Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Anki 2.0.36
العربية, English, Français, Español... YGS Virtual Piano 2010.05.07
English, Français, Español, Deutsch... Vuze 5.7.3
العربية, English, Українська, Français... Modio 5.301